सशस्त्र प्रहरीको घुमुवा हुँ भन्दै बोर्डरमा असुली गर्ने 'यादव' पक्राउ
पहिले सशस्त्र प्रहरीमा बोर्डरमै रहेका यादवलाई तस्करहरुसँगको साँठगाँठ बढी भएको र सोही अनुरुप प्रहरीको नाम भँजाएर खादै आएका थिए ।
२०७८ जेठ ८ शनिबार
दिउसो ४:१९ बजे
विजय कुमार महतो
न्यूज ब्यूरो, सिरहा । प्रदेश नम्बर २ को सिरहा जिल्लास्थित नेपाल भारत बोर्डर (सीमा) मा अवैद्य असुली गर्ने एक पूर्व सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ गरिएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका डिएसपी डा. तपन दाहालको नेतृत्वमा खटि गएको टोलीले नेपाल भारत बोर्डरमा सर्वसाधारण सहित व्यापारीहरुसँग अवैद्य रुपमा रकम असुली गरेको आरोपमा पूर्व सशस्त्र प्रहरीका अर्जुन यादवलाई पक्राउ गरिएको हो ।
सिरहासँग रहेको नेपाल भारतको सीमामा आफू सशस्त्र प्रहरीको घुमुवा प्रहरी हो भन्दै यादवले स्थानीय व्यापारी र सर्वसाधारणहरुसँग पनि अवैद्य असुली गरिरहेको पाइएको लहानका डिएसपी दाहालले बताए ।
उनलाई शुक्रबार राती नै पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय लहानमा राखिएको बताइएको छ । उनलाई लहान नगरपालिका वडा नम्बर २० बरमाहनस्थितबाट पक्राउ गरिएको हो । नेपाल भारतको बोर्डर जानेबाटोबाट उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।
असुलीकै कारण विभिन्न समयमा विभागीय कारवाहीमा परेका यादवलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ । जानकारी अनुसार, यादव गत वर्ष नै सशस्त्र प्रहरीबाट विभागीय कारवाहीमा पटक पटक परेपछि राजीनामा दिएको हो ।
यादव प्रहरी जागिरबाट राजीनामा दिएर पनि आफू सशस्त्र प्रहरीको घुमुवा हुँ भन्दै व्यापारीहरुबाट असुली गरिरहेको थियो । सशस्त्र प्रहरीको नाम भँजाएर उनले असुली गरेको भन्दै उनलाई कारवाहीको तयारी गरिएको हो ।
जानकारी अनुसार, यादव साँझ र बिहान नेपाल भारतको सीमामा गएर असुली गर्दै आएका थिए । पहिले सशस्त्र प्रहरीमा बोर्डरमै रहेका यादवलाई तस्करहरुसँगको साँठगाँठ बढी भएको र सोही अनुरुप प्रहरीको नाम भँजाएर खादै आएका थिए ।
इलाका प्रहरी कार्यालय लहानका डिएसपी डा. तपन दाहालका अनुसार, पक्राउ परेका यादव अझै पनि आफू प्रहरी नै रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनी उपर थप अनुसन्धान अगाडी बढाइएको जनाइएको छ ।
लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान धनुषामा गायक विश्वकर्मा
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । लोक तथा दोहोरी गीत प्रष्ठिान जिल्ला कार्य समिति धनुषाको ७ औं साधारणभा सम्पन्न भएको छ । प्रतिष्ठानको दशैं, दिपावली तथा छठको अवसर पारेर आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रम
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । लोक तथा दोहोरी गीत प्रष्ठिान जिल्ला कार्य समिति धनुषाको ७ औं साधारणभा सम्पन्न भएको छ ।
प्रतिष्ठानको दशैं, दिपावली तथा छठको अवसर पारेर आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रम सहित ७ औं साधारण सभा समेत सम्पन्न गरेको हो । लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान धनुषाका अध्यक्ष विश्वकर्माको अध्यक्षता तथा प्रदेश नं. २ का सँस्थापक कृष्णा गौतमको प्रमुख आतिथ्यमा सो सारधाण सभा सम्पन्न भएको हो ।
समितिको बरिष्ठ उपाध्यक्ष ईन्द्रा थापा, प्रथम उपाध्यक्ष सँजय यादव, महिला उपाध्यक्ष सारथी अमा, महासचिवमा राम कुमार श्रेष्ठ तथा सचिवमा चिरँजीवी गिरीलाई सहित समितिको कोषाध्यक्ष निशा दुधराज (निरासा दुधराज) समेतको उपस्थितिमा ७ औं साधारणसभा सम्पन्न भएको हो ।
यस्तै, समितिको सदस्यहरुमा राजकुमार थापा, निर कुमारी विश्वकर्मा, अम्बिका मण्डल, छेवन मोक्तान, प्रदीपजँग थापा, राम सरोज यादव, बासुदेव दाहाल, टिबी पारखिन, रितेश पाटली, विशाल योगी, ममता अधिकारी र सँजय साह लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सँस्थाका बरिष्ठ सल्लाहकार विजय साह, समिति प्रदेश नं. २ का अध्यक्ष ज्ञानु बस्नेतको विशिष्ट आतिथ्य, कलाकार सँघ महोत्तरीका अध्यक्ष सुदीप कार्कीको आतिथ्यमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
प्रदेश २ः प्रहरी डिएसपी भाटको मधेशी उपर रँगभेदी सोँच र दादागिरीले ईलाकामा त्रास !
जनकपुरः घरमै थियो कैँयौ दिनदेखि सिरकले छोपिएको सडेको लास, छरछिमेक गन्हाएपछि...